Global Voices teny Malagasy » “Voaloboka saosisy” Nepaley: Malaza ao amin’ny Fanjakana Britanika, tsy fantatra ao Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2018 6:13 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Siansa, Tontolo_iainana
Holboellia latifolia fantatra amin'ny hoe zavamaniry “voaloboka saosisy”. Sary  avy amin'ilay mpisera Flickr peganum. (CC BY-SA 2.0)
Avy any amin'ireo ala any Nepal ny zavamaniry voaloboka saosisy, fahombiazana lehibe eo amin'ireo mpitia zaridaina any amin'ny Fanjakana Mitambatra (U.K.), saingy mbola ao anatin'ny haizina izy noho ny tsy fahampian'ny fanentanana sy ny fampiroboroboana sahaza. Miezaka ny manasongadina ity voaloboka saosisy zavamanitra adino efa ela be ity amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fiarovana ankehitriny ireo mpahay zavamaniry Nepaley sy Indiana.
Manana lisitra botanika goavana ahitana karazan-javamaniry voninkazo miisa 6000 karazana  i Nepal (avo efatra heny noho ny ao U.K.), ary maminavina ireo manampahaizana ara-javamaniry fa hahatratra karazana 6 600 ny isa rehefa trandrahana tanteraka ireo faritra lavidavitra kokoa. Manana ny 2,8 isanjaton'ny fitambaran'ny karazan-javamaniry manerantany i Nepal ary efa ho 2,8 isanjato amin'ny fitambaran'ny maneran-tany ny anjarany amin'ny karazan-javamany voninkazo.
Antsoina hoe “Gufala” any Nepal, avy any Himalayas ny voaloboka saosisy ary avy amin'ny voankazo endrika saosisy volomparasy-menamena ny anarany. Mahatonga ity zavamaniry ity ho manintona ireo mpitia zaridaina manerantany ny voninkazony volomparasy, amin'ny endrika lakolosy sy mamy malefaka. Hita any anaty ala, hazo hetry sy lembalemba miafina ao Himalayas manomboka any Pakistana ka hatrany atsimo andrefan'i Shina amin'ny haavo 1,500-4,000 metatra miala ny ranomasina ny voaloboka.
Amin'ny fomba mahazatra,dia heverina fa mahomby amin'ny fitsaboana aretin'ny vanintaolana  (Sikkim, India) ny voaloboka, ary ny tahony kosa, rehefa mivalona boribory, dia heverina fa manasitrana ny olana amin'ny taolana (Darjeeling, India).
Frustrated Gardener, bilaogy momba ny zaridaina avy amin'i Dan Cooper, manazava ny zava-mahatalanjona tsy manampaharoa amin'ity “felam-boninkazo mandady maitsoririnina” sady manitra ity: 
Ny Holboellia latifolia dia felam-boninkazo mandady maharitra mahavariana raha te handrakotra rindrina na pergola (talantalana) haingana ianao. … Ny tena mahafinaritra amin'ny Holboellia dia ireo voninkazo tsy misy dikany saingy manitra mahavariana izay mipoitra amin'ny fiandohan'ny lohataona ary maharitra herinandro maromaro. Ny voninkazo lahy maitsomaitso sy ny voninkazo vavy mavokely dia miseho ho sampam-boaloboka miaraka amin'ny tahony mikambana. Mameno ny zaridaina amin'ny fofona gardenia izy ireo, ary matanjaka be rehefa mandritra ny asara. Ny hany takiany dia fialofana kely iarovana amin'ny tafio-drivotra, ny tany mando sy ny sakafo misy rà, ny trondro sy ny taolana isaky ny lohataona.
Nankafy momba ny hatsaran'ny voaloboka saosisy ihany koa ireo mpahay zaridaina sady mpahay zavamaniry ao amin'ny Twitter:
Famariparitana mahaliana momba ny voankazo Holboellia latifolia hitan'ny @ArchiPlants  tamin'ny herinandro lasa.
Mahafatifaty loatra ny holboellia latifolia – feno ny voninkazo lahy sy vavy
Holboellia latifolia voankazo ‘saosisy’ maniry ao Manipur, India..matsiro!
Ny fifandraisan'ny voaloboka saosisy tamin'ny fanjanahantany
Nandeha tany Nepal tamin'ny taona 1971 i Roy Lancaster , Britanika mpamboly zavamaniry, mpitia zaridaina, mpanoratra sady mpandefa fandaharana ary nitondra voan-javamaniry 400 , anisan'izany ny voaloboka saosisy, araka ny voalazan'ny bokiny A Plantsman in Nepal .
Efa tamin'ny tapaky ny taona 1800 tany ho any, tamin'ny fanjakazakan'ny fitondrana Britanika tany India ny fikarohana momba ny voaloboka saosisy. Nilaza ilay Nepaley mpahay zavamaniry Kamal Maden  fa ilay Danoà mpandidy sady mpahay zavamaniry, Nathaniel Wallich  no voalohany nandinika ny karazana voaloboka saosisy nandritra ny fiasany tany India mba hananganana ny Zaridaina Botanika ao Calcutta ary nomena ny anaran'ny namany mpahay vorona (ornithologue) Carl Peter Holboell  ilay zavamaniry.
Pejy avy amin'ny kahien'i Nathaniel Wallich, #4957 manasongadina ny zava-maniry Holbeoellia latifolia, 1821, nahazoana alalana.A page from Nathaniel Wallich's notebook, #4957 details the Holbeoellia latifolia plant, 1821, used with permission.
Na dia izany aza, nanoratra vao haingana tao amin'ny Guardian ilay manam-pahaizana momba ny zavamaniry Robbie Blackhall-Miles fa ny Holboellia dia nomena anarana avy amin'i Fred Louis Holboell, mpitantana ny Zaridaina Botanika ao Copenhagen.
Niresaka tamin'ny Global Voices, nanamafy i Uttam Babu Shrestha,  izay niasa momba ny zava-maniry Indiana nandritra ny dimy taona ary voatendry hikaroka literatiora sy hankatoa anarana zavamaniry ao amin'ny Oniversite Harvard hoe:
Tsy fantatro loatra ny fomba nanomezana anarana azy (karazana epithet). Navoakan'i Wallich voalohany toy ny Holboellia latifolia izany tao amin'ny bokiny “Tentamen Florae Napalensis Illustratae” andiany 1, fizarana 24, pejy 16, 1824, ary tatỳ aoriana, namadika izany ho Stauntonia latifolia tao amin'ny katalaoginy i Wallich (ny anaran'ny boky dia ny Lisitry ny karazana zavamaniry maina ao amin'ny Tranombakokan'ny East India Company: Voangona teo ambany fanarahamason'ny Dr. Wallich ao amin'ny Zaridaina Botanikan'ny Orinasa ao Calcutta) … Anarana nekena ny Stauntonia latifolia ary basionyme (mitovy hevitra) ny Holboellia latifolia ary karazana mitovy ny roa tonta araka ny voalazan'i Wallich.
Maden kosa nanoratra esoeso  momba ny voaloboka saosisy:
Vitsy no fantatra momba ity zavamaniry ity tamin'ny lahatsoratra fikarohana sy boky navoaka tao Nepal saingy betsaka kosa ny vaovao hita tany amin'ny firenena vahiny. Afaka mampiroborobo ny Gufala ho toy ny zavamaniry maitsoririnina sady mpandady miaraka amin'ny voninkazo mahafinaritra ao an-tanàna tendrombohitra ireo mpamboly zana-kazo. Azo amidy ny voankazony matsiro.
Mamboly sy mihinana voankazo vahiny tahaka ny zavokà sy kiwi isika, ary mividy azy ireo amin'ny vidiny lafo. Na dia izany aza, tsy fantatsika ankory fa mivarotra voankazo matsiro avy amin'ny alantsika manokana ny vahiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/29/121953/
 karazan-javamaniry voninkazo miisa 6000 karazana: http://www.floraofnepal.org/countryinformation
 mahomby amin'ny fitsaboana aretin'ny vanintaolana: https://www.researchgate.net/publication/302026515_Traditional_Use_and_Management_of_Non-Timber_Forest_Products_in_Kangchenjunga_Landscape_Implications_for_Conservation_and_Livelihoods
 manazava ny zava-mahatalanjona tsy manampaharoa amin'ity “felam-boninkazo mandady maitsoririnina” sady manitra ity:: https://frustratedgardener.com/2013/01/26/strange-fruit/
 voan-javamaniry 400: https://www.bookdepository.com/Plantsman-Nepal-Roy-Lancaster/9781851491797
 nanoratra vao haingana tao amin'ny Guardian : https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gardening-blog/2014/may/27/sausage-vines-scent-stauntonia-holboellia
 Uttam Babu Shrestha,: https://twitter.com/uttambabu